Apple TV + manasonia fifanarahana fiaraha-miasa amin'ny mpandresy Oscar Adam McKay | Avy amin'ny mac aho
Apple TV + dia nanao sonia ny fifanarahana fiaraha-miasa amin'i Adam McKay, mpandresy an'i Oscar
Ny fe-potoana farany dia mitatitra fa ny sehatra video streaming Apple TV + dia nahavita a fifanarahana safidy voalohany amin'ny taona maro miaraka amin'ny studio famokarana fandresena nataon'i Adam McKay, Hyperbject Industries. McKay dia mpanoratra senariô, talen-tsokajy ary mpamokatra ary ny orinasany mpamokatra dia miasa amin'ny maha sampan-draharaha famokarana marobe.
Ity fifanarahana vaovao nifanaovan'ny orinasa roa tonta ity dia midika fa ny Apple TV + dia hanao laharam-pahamehana amin'ny tetikasa horonantsary aseho amin'ny script manaraka. Izany hoe hanana i Apple ny fotoana ahitanao voalohany ireo horonantsary novokarin'i Hyperobject Industries ary, avy eo, manapa-kevitra na hitondra azy ireo amin'ny efijery na tsia. Raha tsy liana ianao, dia mety atolotry ny studio azy ireo amin'ny sehatra video hafa mikoriana.
Niasa tamina tetikasa samihafa i McKay nandritra ny taona maro, ao anatin'izany ireo hatsikana malaza Rahalahy amin'ny baolina (miaraka amin'i Will Ferrell sy Jhon C. Reilly) ary Laps taloha (miaraka amin'i Will Ferrell). Niasa ihany koa izy Ny filokana lehibe, sarimihetsika miaraka amin'izany nandresy ny Oscar avy amin'ny Hollywood Academy toy ny Sangan'asa namboarina tsara indrindra.
Amin'ity fifanarahana ity dia hiasa miaraka amin'i Apple ihany koa ireo mpamokatra Kevin Messick, Todd Schulman ary Betsy Koch. Amin'izao fotoana izao, tsy fantatra izay tetikasa ao amin'ny studio famokarana hahita ny jiro amin'ny Apple TV +Saingy mety tsy ho ela akory isika vao manomboka mandre momba ireo tetikasa ireo.
Ny fifanarahana safidy voalohany farany indrindra, hitantsika fa miaraka aminy MishaGreen, iza no nahavita fifanarahana toy izao, taorian'ny fametraham-pialan'ny HBO hamokarana ny vanim-potoana faharoa amin'ny andiam-pitiavan'i Lovecraft Country, andiany iray izay nahazo fanolorana loka Emmy Award, loka izay ahazoan'ny Apple loka 35, 20 amin'izy ireo ho an'i Ted Lasso fotsiny.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple » About us » Apple TV + dia nanao sonia ny fifanarahana fiaraha-miasa amin'i Adam McKay, mpandresy an'i Oscar
Ny sasany amin'ireo magazay Apple dia miakanjo Lalao Olaimpika ho fankalazana ny lalaon'izy ireo
Fanavaozana Mactracker miaraka amin'ny New 24 "iMac M1, iPad Pro ary maro hafa